Kenya oo sheegtay in ay dileen xubno Shabaab ka tirsan | KEYDMEDIA ENGLISH
Kenya oo sheegtay in ay dileen xubno Shabaab ka tirsan
Dowladda Kenya ayaa sheegtay, in ay dileen dagaal-yahano ka tirsan kooxda Al Shabaab, kadib weerar lagu qaaday deggaanka Bodhei, oo ay ku dhuumaaleysanayeen.
BODHEI, Kenya- Saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ayaa sheegay, in ay dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan kooxda Al Shabaab, kuwaas oo ku dhuumaaleysanayey deggaanka Bodhei ee dalka Kenya.
Warka ka soo baxay saraakiisha Kenya, ee howl-galkan fulisay, ayaa lagu sheegay, in lagu raad joogay xubnaha maanta lagu dilay weerarka, waxaana xogtooda la hayey tan iyo bartamihii sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2021-ka.
Kenya waxey saraakiishooda ka dhawaajiyeen, in ay sii wadi doonaan, howl-gallada lagu baacsanayo kooxda Al Shabaab, waxeyna hoosta ka xariiqeen in ay soo bandhigi doonaan dagaal-yahanada ay dileen.
Xubnaha Shabaabka ee ay dileen ciidamada Kenya, ayaa waxaa ku jira saraakiil muhiim ah, oo kooxda u qaabilsanaa, weerarada Al Shabaab ay ka fulineyso deggaanada waqooyi bari Kenya, waxaana badankood ay yihiin kuwa heysta dhalashada dalka Kenya.
Dowladda Kenya ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday in ay muujiyaan feejignaan, iyadoo ay xusid mudan tahay, in Ragga Shabaabka ee maanta la dilay, ay yihiin kuwii dabayaaqadii bishii December fuliyey, weerar ka dhacay deggaanka Lamu, halkaas oo lagu dilay 6 ruux oo Kenyan ah, oo qaarkood guryahooda loogu galay.
Bilihii ugu danbeeyey waxaa kordhay weerarada ay Shabaabku ka geysanayaan deggaano ka tirsan Kenya, kuwaa oo laga xusi karo: Widho, Juhudi, Ukumbi, Marafa, Mashogoni, Githurai iyo Bodhei, waxaana khatarta amni ee ugu weyn ay tahay, in Shabaabku ay guryaha ugu galayaan shacabka Kenyaatiga ah, ee ay ku tuhmaan in ay xiriir la leeyihiin ciidamada dalkaas.